Bhatiri rakavandudza zvakanyanya muBeta 6 yeIOS 11 | IPhone nhau
Mazuva mashoma apfuura tanga tichitaura nezve kufamba kukuru kweApple kwakatangwa iOS 6 Beta 11, yakatibata tese nekushamisika nekuti raingova svondo chete kubvira iyo iOS 5 Beta 11 yaburitswa. Zviri pachena kuti kubva kukambani yeCupertino vari kushanda zvakaoma nechinangwa chekuvandudza uye kupora sisitimu inoshanda kusvika pakakwirira, ipapo chete ndipo pavachaita kuti ishande nemazvo.
iOS 10.3.3 ndeimwe yeshanduro iri kupa yakanakira kuzvimiririra kuita, zvisinei, zvinoita sekunge Apple yanga ichida kutora mabhatiri ane iOS 11 uye isu tawana zvimwe zvinoshamisa, semuenzaniso kuvandudzika kunoonekwa mukuzvitonga mune yekushandisa system.
Chaizvoizvo hakusi iko chete kuvandudzwa kwatakawana neIOS 11, chokwadi ndechekuti pakati pezvimwe zvinhu iyo yekuvhenekesa sensor iri kushanda nemazvo, pamwe neiyo switch switch yamira kuratidza iyo bug iyo yatangoona iyo hafu yeiyo makadhi ekusarudza. Zvino izvi zviviri zvinoshanda zvinoshanda nemazvo, zvisinei, chii chakabata pfungwa yedu zvakanyanya chave chiri icho kuwedzera kuzvitonga, nekushandisa zvine musoro tave kutosvika nyore nyore maawa mashanu ekushandisa uye iro izere zuva.
Kune rimwe divi, kuchine zvimwe zvinoshandiswa izvo pasina chikonzero chakajeka zvinoita kunge zvinopesana nekugadziriswa kweiyo iOS 11, muenzaniso ndeyeYouTube, iyo ine yakawandisa bhatiri kushandiswa, zvakanyanya zvekuti mudziyo unotopisa kupfuura zvakakurudzirwa. Kunyange zvakadaro, Nezve zvimwe zvese zvinoshanda, foni iri kuchengetedza yakagadzikana bhatiri kunwa, iyo kunyange isingasvike pamatanho eIOS 10.3.3, asi ari mumazwi ane musoro kana tichifunga kuti iBeta. Tichaenderera mberi tichikuedza kuti tikupe imwe nhau, kunyangwe Apple yatove kuita senge yakatarisa mukugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Bhatiri rakavandudza zvakanyanya muBeta 6 yeIOS 11
Ini ndinongova neiyo beta 4 uye ndinoteerera yangu iPhone 6+ ye128 zvakanyanya, zvekuti ndakafunga kuidzosera kuIOS 10, ndichiverenga kuti beta 6 yakanaka, ndinoshuva kumirira kuti ndione kudhonza, izvozvi Ndiri kurodha pasi beta 5, asi ndichiverenga zvakataurwa naTony, handizive kuti chii chichava nani zvekare ..
Remote Control, Textify uye zvimwe zvinoshandiswa zvemahara chete izvozvi